सिटि भ्यालु के हो ? यो घटी वा बढी हुँदा के हुन्छ ?
दोस्रो लहरको उछालसंगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ । पिसिआर पोजिटिभ आएका हरेक व्यक्तिलाई सिटि भ्यालुमा धेरै चासो देखिएको छ । सिटि भ्यालुबारे फरकफरक धारणाको कारण धेरै व्यक्तिमा कन्फ्युजन देखिएको छ ।
सिटि भ्यालु संक्रमितको नाक वा घाँटीमा भएको भाइरसको लोड हो । यो फोक्सोमा भएको भाइरसको लोड हैन । तसर्थ सिटि भ्यालु बढी अंकमा हुँदा सुरक्षित भइने र सिटि भ्यालु थोरै अंकमा हुँदा खतरा हुने हुँदैन ।
सिटि भ्यालुलाई धेरै कुराले असर गर्छ । नाकबाट लिइएको स्याम्पल र घांटीबाट लिइएको स्याम्पलमा पनि सिटि भ्यालु फरक हुन्छ । त्यस्तै स्वाब कसरी लिइयो ? कति मात्रामा लिइयो ? त्यसलाई कसरी सुरक्षण, परिवहन र परीक्षण गरियो ? परीक्षण गर्दा कस्तो किट वा रिएजेन्टको प्रयोग गरियो ? कस्तो जनशक्तिले परीक्षण गर्यो ? आदि अनुसार पनि सिटि भ्यालु फरक हुनसक्छ । प्रयोगशाला अनुसार पनि सिटि भ्यालु फरकफरक हुन्छ | तसर्थ सिटि भ्यालु हेरेर आत्तिनु वा ढुक्क हुनु जरुरी छैन ।
सिटि भ्यालु एउटा चक्र पनि हो । शरीरमा भाइरस प्रवेश गरेको ३- ४ दिनसम्म भाइरसको मात्रा कम हुन्छ । तसर्थ सिटि भ्यालु २४ भन्दा माथि देखिन्छ । उक्त व्यक्तिमा ७ दिनपछि भाइरसको संख्या धेरै हुन्छ । त्यो बेला सिटि भ्यालु २४ भन्दा धेरै तलसम्म देखिन्छ | त्यहि व्यक्तिमा निको हुनेबेला भाइरस नष्ट भएर भाइरसको संख्या कम हुन्छ अनि सिटि भ्यालु २५ भन्दा माथि देखिन्छ । यो चक्र अधिकांश व्यक्तिमा देखिन्छ ।
बालबालिका तथा युवामा इम्युनिटी पावर धेरै हुन्छ । त्यस्तै खोप लिएका व्यक्तिमा भाइरसविरुद्धको एन्टिबोडी हुन्छ । एकपटक संक्रमण भएका व्यक्तिमा पनि एन्टिबोडी बिकास भएको हुन्छ । त्यस्ता व्यक्तिमा भाइरस घांटीमै नष्ट हुन्छ । तसर्थ सिटि भ्यालु १२, १४ जस्तै छोंटो अंकमा नदेखिन सक्छ ।
प्रबिधि तथा देश अनुसार सिटि भ्यालु कतै ३२ तथा कतै ४० सम्मलाई पोजिटिभ मानिएको छ । हाम्रो देशमा ३६ भन्दा माथिल्लो अंकलाई नेगेटिभ मानिन्छ ।
सिटि भ्यालुमा अलमल हुनु पर्दैन । रिपोर्ट पोजिटिभ भए पोजिटिभ तथा रिपोर्ट नेगेटिभ भए नेगेटिभ बुझेर तदनुसार गर्नुपर्दछ ।
हामीले एउटा खेतमा इनार खन्दैछौं । १० – १२ वटा रिंग हाल्दैमा पानी आयो भने त्यो जमिनमा पानी प्रशस्त छ भन्ने बुझिन्छ । तर ३० – ३२ वटा रिंग हालेपछि मात्र पानी आयो भने त्यो जमिनमा पानी कम छ भन्ने बुझिन्छ । पिसिआर टेस्टमा पनि भाइरस लोड धेरै छ भने १०- २० साइकलमै भाइरस भेटिन्छ | भाइरसको लोड कम छ भने ३० -३२ साइकलमा मात्र भाइरस भेटिन्छ । सिटि भ्यालुलाई यसरी पनि बुझ्न सजिलो हुन्छ ।
कर्मचारी सरुवा प्रक्रिया नरोकिने
केन्यामा हेलिकप्टर दुर्घटना, चार जना पर्यटकको मृत्यु
विश्वकै अग्लो पैदलयात्री पुल र बन्जिजम्प निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा